अब लक्ष्मीको कुरा कसले पत्याउने ? किशोर र लक्ष्मीले समाज बिगारे शृजना वाग्लेलाई आरोप लाउन मिल्छ ? (भिडियो सहित) – Classic Khabar
अब लक्ष्मीको कुरा कसले पत्याउने ? किशोर र लक्ष्मीले समाज बिगारे शृजना वाग्लेलाई आरोप लाउन मिल्छ ? (भिडियो सहित)
April 29, 2021 151
तर अहिले त्यो कुरा बाट मुख मोडेकी छिन लक्ष्मीले । मैले ग लत गरेछु आफ्नो माया गर्ने मान्छेलाई कसैले उचालेको भरमा भनेकी छिन लक्ष्मीले । आहिले यही बिषयमा कलकार सबिता भट्टराई ले आफ्नो बिचार राखेकी छिन । हेरौ भिडियो
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन,बैशाख १६ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextकोरोना संक्रमण भै अस्पतालमा भर्ना भएकी पूर्वरानी कोमल आइसियूमा, भयो सास फेर्न मुस्किल
कृष्ण र रुपाको छोरासँग खेल्दै गरेको यस्तो भिडियो भाईरल, एकैछिनमा लाखौंले हेरे (भिडियो सहित)
धेरै फिल्ममा राजेश हमालको आमा बनेकी पुरानो कलाकार सँगम भण्डारी मिडियामा । भारत सुटिँगमा जाँदा राजेश हमालले सलमान खान, आमिर खानलाई वास्ता नगरेको किस्सा सुनाईन् (भिडियो हेर्नुस)